Maharary ve ny tombokavatsa eo amin'ny kiho? Izay tokony ho fantatrao | Ny fanaovana tatoazy
Susana godoy | | tombokavatsa, Tattoos on, Tatoazy amin'ny sandry
Ny tatoazy dia azo atao na aiza na aiza amin'ny vatana raha mbola ny endrika voajanaharin'ny vatana no raisina ka ny sary hohaingoina dia toa tsara amin'ny hoditra misy valiny tena tsara. Ny faritra iray izay matetika manintona tokoa noho ny fijerin'ny sary hita rehefa mahazo tombokavatsa amin'ity olona ity ny kiho.
Ny kiho dia ampahany amin'ny vatana ka raha manaonao azy ianao dia mety hadinonao fa nanao tatoazy ianao eto rehefa mandeha ny fotoana, satria tsy ho hitanao isan'andro akory izany raha tsy hoe navadibadikao ny sandrinao hijery ny tatoazy anao, na rehefa mahita ny tenanao amin'ny sary ianao na rehefa mijery fitaratra ianao. Raha te-hanao tatoazy mahafinaritra eo amin'ny kiho ianao dia azonao atao ny mametraka fanontaniana amin'ny tenanao: marary be ve ny tombokavatsa eo amin'ny kiho?
Fanontaniana tsara io satria raha misy milaza aminao fa tsy nahatsikaritra na inona na inona izy ireo tamin'ny fotoana nanaovany tombokavatsa teo amin'ny kiho, dia azo inoana fa nandainga taminao izy ireo, satria naratra be na kely. Mazava izany hiankina amin'ny tokonam-baravarana fanaintainana anananao ny zava-drehetra Ary raha tsy zakanao be ny fanaintainana dia azo inoana fa tsy maintsy miteny amin'ilay mpanao tatoazy ianao hanao azy amina fotoam-pivoriana maro na hijanona isaky ny x fotoana mba hahafahanao miala sasatra amin'ny fanaintainana.
Ny siko dia faritra marefo satria taolana izy io ary hasiana tombokavatsa eo amboniny, ka rehefa mitranga eo amin'ny soroka na faritra hafa misy taolana dia maharary be izy. Fa ny faritra mety handratra indrindra dia ny faritra kiho, avy eo ny faritra manodidina na dia mahatsapa fanaintainana aza ianao azo antoka fa tsy ho henjana kokoa.
1 Fikarakarana sy fitsaboana aorian'ny nahazo tombokavatsa misy kiho
1.1 Ireo dingana tokony harahina aorian'ny ora voalohan'ny tatoazy eo amin'ny kiho
1.2 Manosotra hoditra hatrany
1.3 Impiry aho no tokony manasa tatoazy?
1.4 Andro vitsivitsy taty aoriana, ny mangidihidy
1.5 Aza asitrika ao anaty rano ary ampisehoy amin'ny masoandro
Fikarakarana sy fitsaboana aorian'ny nahazo tombokavatsa misy kiho
Ireo dingana tokony harahina aorian'ny ora voalohan'ny tatoazy eo amin'ny kiho
Rehefa mahazo ny tatoazy ianao, ny artista manao tombokavatsa dia hanome anao toro-hevitra maromaro, izay tokony harahinao. Ankoatr'izay dia mahazatra azy ny mivarotra izany aminao ary manome hevitra fa tokony handany ora vitsivitsy ianao amin'ilay bandy voalaza io, hiarovana ny hoditrao amin'ireo bakteria mety hitranga. Rehefa lasa ny fotoana nolazaiko dia tonga ny fotoana hanasana azy. Aza adino fa alohan'ny zavatra hafa rehetra dia tsy maintsy manasa tanana tsara ianao. Avy eo dia hesorinao ny fehin-kibo ary aorian'izany, amin'ny savony sy rano misy bakteria, dia hesorinao ny sisan-taola sisa tavela amin'ny tatoazinao. Tsy maintsy ataonao tsara foana ity dingana ity. Aleo tsy asiana rano mivantana fa aleo mandena tsara ny tananao. Rehefa maina izany dia aza sintomina ny hoditra fa kitiho kely fotsiny no anaovanao azy.
Manosotra hoditra hatrany
Amin'ny hoditra maina, ny azontsika atao dia ny manosotra crème izay manokana amin'ny tatoazy ary manampy antsika ho sitrana. Ilay mpanefy tatoazy iray ihany dia afaka mitarika anao satria misy maro eny an-tsena. Aza adino ny mampihatra azy tsy tapaka mba tsy hijanona maina izy io, satria mety hiteraka karazan-koditra io. Rehefa mampihatra azy, aza saronana loatra ny tatoazy, satria mila miaina. Amin'ny vola kely dia hanana mihoatra ny ampy isika. Soso-kevitra ny manosotra ny menaka manitra rehefa avy nosasana sy nohamainina nandritra ny herinandro. Aorian'ity fotoana ity dia afaka mampiasa moisturizer mahazatra ianao. Fa tsara kokoa hatrany ny tsy anana azy ireo, mandra-pahatapitry ny fanasitranana tanteraka.
Impiry aho no tokony manasa tatoazy?
Io dia iray amin'ireo fanontaniana napetraka matetika ary holazainay fa hiankina foana izy io. Raha ny fitsipika dia voalaza fa in-droa intelo isan’andro, hatramin'ny 5, no mahazatra indrindra. Fa raha ataonao imbetsaka kokoa izany dia tsy midika izany fa ny tattoo dia tsy mitandrina ny tenany na manasitrana. Na dia mila hosasana matetika kokoa aza ireo faritra miharihary indrindra. Satria te hisoroka ny fihanaky ny bakteria isika ary ny kiho dia mety ho iray amin'ireo faritra noresahintsika ireo.
Andro vitsivitsy taty aoriana, ny mangidihidy
Tsy afaka ary tsy tokony hikorontana ny tenantsika isika na dia angatahan'ny vatana aza izany. Miaraka amin'ny rano kely, ny menaka manitra ary nipaipaika tamin'ny lamba famaohana na lamba madio, dia tokony ho ampy ho an'io mangidihidy io. Saingy tianay ny hanasongadinana azy io satria iray hafa amin'ireo dingana ireo izay tsy mahomby mihitsy isaky ny manao tatoazy izahay. Ampahany amin'ny fizotry ny fanasitranana izy io, ka saika tsy azo ihodivirana ny fisehoany, andro vitsivitsy na herinandro aorian'izay. Hiseho ny morontsiraka izay hianjera irery.
Aza asitrika ao anaty rano ary ampisehoy amin'ny masoandro
Raha heverintsika fa satria tatoazy amin'ny kiho io dia tsy handray ireo dingana ireo amin'ny fanasitranana azy isika, dia diso be isika. Satria mbola tombokavatsa io, na lehibe kokoa na lehibe kokoa ary aiza no misy azy. Tianay ny hahasitrana azy tsara ary noho izany dia tsy maintsy aza asitrika anaty rano. Araka ny efa noresahintsika teo aloha dia tsara kokoa foana ny mandena azy fa tsy manampy rano mivantana. Etsy ankilany, tokony hialanao ny hazavan'ny masoandro. Noho izany dia tsara kokoa foana ny misafidy ny fararano na ririnina, rehefa mahazatra kokoa ireo faritra ireo ny fialofana.
Mba hahafahanao manome isa ny tombokavatsa kiho mahavariana dia avelako ho anao ny galerin'ny sary. Ka azoko antoka fa hamporisihina hanao ny anao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny sandry » Maharary ve ny tombokavatsa eo amin'ny kiho?
Tatoazy natao ho an'ny lehilahy